နော်ဝေက Vieddekke ရေကာတာ အဖွဲ့ကြီး – အဆက်- XXIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » နော်ဝေက Vieddekke ရေကာတာ အဖွဲ့ကြီး – အဆက်- XXIII
နော်ဝေက Vieddekke ရေကာတာ အဖွဲ့ကြီး – အဆက်- XXIII
Posted by Kyaemon on Nov 5, 2012 in Business & Economics, Community & Society, Education, Photography, Travel | 1 comment
Norway Dams Viedekke
နော်ဝေက Vieddekke ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကြီး ရဲ့အဆက်
Veiddekke ရဲ့လက်ရာ အကြွင်းအကျန် အချို့ကို ဆက်လက်ပြီး တင်ဆက်လိုက်တာပါ၊
၄င်းအဖွဲ့က ရေကာတာတွေရဲ့ Core ဗဟိုရ်ချက်မ အူတိုင်တွေကို
Asphalt နိုင်လွန်ကတ်တရာ ခင်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အထူးကျွမ်းကျင်ကြောင်းဖော်ပြပြီးပါပြီ၊
Asphalt core history – Asphalt core Dams
၁၉၆၀ ဝန်းကျင်မှာ ဂျာမနီ က ရေကာတာ အူတိုင်တွေမှာ နိုင်လွန်ကတ်တရာ စ တင် ခင်းပေးတာ
The first ever asphalt core dam built byaNorwegian contractor was Storvassdammen, built by Sig. Hesselberg in 1981, which Veidekke subsequently acquired in 1989.
In 1983, however, Veidekke, inajoint venture with Korsbrekke & Lorck, won its first asphalt core dam contract for construction of the Riskallvatn dam.
From 1989, the activities of Veidekke and Sig. Hesselberg were merged intoasingle unit and internationalised as dam building activity in Norway diminished.
With continuous development of its asphalt core technology and construction technology, today, under the name of Veidekke, the Asphalt Core Dams division has participated on or completed construction of 21 asphalt core dams, of which seven have been built in Norway.
This specialised division represents the only world-wide activity within the Veidekke group.
Advantages of Asphalt Core – Advantages asphalt core – Asphalt core Dams
Advantages of Asphalt Core
Earthquake resistant and shortened construction time
Mora de Rubielos Dam
Asphalt isaviscoelastic-plastic material withaself-healing ability.
A Hundred dams worldwide
More than one hundred asphalt core dams have been built worldwide since 1964, under all climatic conditions. All of them have an excellent performance record with negligible leakage.
Conditions and earthquake risk
Earthquake risk isadecisive factor in many countries for the design of dams. Through extensive research and based on experience, asphalt core dams have proven to beavery attractive option under such conditions. Asphalt is an elastic/ plastic material withaself healing property, quickly adapting itself to embankment displacements and settlements while maintaining its impervious properties even after exposure to severe earthquake strains.
With the machinery and technology established, asphalt core dams can be built quickly and efficiently even in areas with high precipitation, in contrast to embankment dams built with clay or moraine cores where construction time is often dramatically prolonged due to rainy conditions. The shorter construction time offersamajor financial benefit in areas with high precipitation.
The asphalt core and the embankment are built simultaneously allowing for reservoir filling in parallel with the dam construction. The reservoir can therefore be established when dam construction is completed, and the coffer dams design can often be simplified.
ဆက်မလုပ်ခင် ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်း “ပေမှီမမှီ” ကိုချက်ချင်းသိနိုင်တာ၊
မှတ်တမ်းလဲ သေသေချာချာ တင်ထားတာ၊
ရေကာတာ ထိန်းသိမ်း ရတာလဲသက်သာ
A well designed and built embankment dam with an asphaltic core has proven to be virtually maintenance free. The asphalt core inside the dam body is protected from oxidation and ageing, and the asphalt’s viscoelasticity (plastic properties) remain unchanged for any over its lifetime. This type of protection also significantly protects the dam from sabotage or acts of war.
Asphalt is completely non harmful to the environment and can be used for potable water and irrigation dams.
( နိုင်လွန်ကတ်တရာရဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝ ရဘို့) ရေကာတာဆောက်လုပ်ရာ နေရာမှာဘဲ
The width of the asphalt core varies with the height of the dam, foundation, earthquake risk and the quality of the rock fill. Foramedium height dam up to 60/ 70 meters, the core width is typically 50 cm. For higher dams, the core width is wider at the bottom and tapers gradually.
The asphalt is produced in an asphalt batch plant and laid together with the transition zones on each side of the core, in layers of 20 to 25 cm in thickness. Special machinery constructed by Veidekke is required to lay the asphalt. Three layers can normally be laid within one day. The asphalt layers fuse together as one seamless homogenous asphalt wall.
Research and Studies – Asphaltic Concrete Cores – Research Asphalt Core Dams – Asphalt core Dams
Research and Studies – Asphaltic Concrete Cores
This book describes the Norwegian and international experience and practice with the use of asphaltic concrete cores for embankment dams
The book Asphaltic Concrete Cores for Embankment Dams isaresult ofaresearch and development project which summarized and evaluated available experiences and expanded the know-how through experimental and analytical studies.
The sponsors of the book have been:
Statkraft FS (The Norwegian Energy Corporation)
The Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
Read the publication Asphaltic Concrete Cores for Embankment Dams here.
Cyclic behavior of Asphalt Concrete Cores
Also read the “Cyclic behavior of Asphalt Concrete Cores” by Wang and Höeg published May 2011.
Earthquake resistance asphalt core dams
In this section we present the documented field performance and theoretical analyses of embankment dams with asphalt concrete facing or core subjected to earthquake excitations. The report isacollaboration between the Norwegian Geotechnical Institue (NGI) and Veidekke Industry. The earthquake resitance documentation can be downloaded here (.pdf).
Overview of completed Asphalt Core Dams
Seeacomplete list of world-wide embankment dams built with asphalt core concrete
Construction methods (movie)
Veidekke Asphalt Core Dams has also producedamovie that explicitly show the construction methods when building dams with asphalt concrete as the core of the dam.
The movie can be seen here
We have designedabrochure that show an overview of how the asphalt concrete core is operated and placed includingalist of references. The brochure can be downloaded here.
Asphaltic concrete cores research
Cyclic Behavior of Asphalt Concrete Core.pdf
Earthquake Resistance of AC Dams
ACC dams – revised Jan 2011
Asphalt Core Brochure
Veidekke Asphalt Core Dams – About us – Asphalt core Dams
By international standards, the Asphalt Core Dam division in Veidekke isaglobal leader in asphalt core dam technology and expertise. This is also the only world-wide activity in Veidekke Group.
Over the last 20 years, asphalt core dams have been recognized as attractive both financially and technically.
For the last decade, Veidekke’s Asphalt Core division has been the leading specialist contractor and advisor in the building of asphalt core dams. China, Canada, Brazil and Iran are among many countries where Veidekke has exported its expertise.
The Veidekke Asphalt Core Dam division hasalong list of references, isaproven contracting partner and regularly receives design and construction inquiries from all over the world.
Asphalt Core Dams – Veidekke Industry – YouTube
Uploaded by VeidekkeASA on Feb 3, 2011
By international standards, the Asphalt Core Dam division of Veidekke Industry isaglobal leader in in asphalt core dam technological and expertise. This movie, from the 1990s show the technology involved.
Veidekke ASA’s photosets on Flickr
ရှေးစံနစ်ဟောင်းနဲ့ လုပ်ထားခဲ့တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံSouth Africa က Greater Ceres ရေကာတာကိုတောင်
ပြန်ဖျက်ပြီးနိုင်လွန်ကတ်တရာအူတိုင်နဲ့ပြန်လုပ်တာ၊ Vieddekke က ကန်ထရိုက် ရသွားတာ၊
Greater Ceres Asphalt Core Dam – South Africa – Projects – Asphalt core Dams
တရုတ်ဝံကျီးချုပ် ဘိုးဘိုးဝမ်ကလည်း စီးပွားရှာတဲ့နေရာ သိပ်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ကြေးမုံဂျီးပြောတဲ့ ကတ္တရာခင်းတာလောက်တော့ ပျင်းသေးသတဲ့..။
by FNG on October 30, 2012
ဒေးဗစ် ဘာဘိုဇာ(ဘေဂျင်း) တင် ကျော်ကျော် စိုး ဘာသာ ပြန် ဆိုသည်။
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိခင်ဟာ တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းက ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးပါ။ သူ့ ဖခင်ကတော့ ဥက္ကဌကြီးမော်ရဲ့နိုင်ငံရေး စည်းရုံးမှုတစ်ခုမှာ အိမ်မွေးဝက်တွေ ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် အ မိန့် ပေးခံရခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ “ သူရဲ့ကလေး
ဘ၀ အတောအတွင်း ကျွန်တော်တို့မိသားစု အရမ်းကို ဆင်းရဲခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မိန့်ခွန်း တစ်ခုမှာ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခုတော့အသက် ၉၀ အရွယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့အမေယန်ဇီယွန် ဆင်းရဲမှုတွေကို ပဲကျောခိုင်းနိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး တော့ ငွေထုတ် ၊ ငွေသွင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူလုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အပြောအရနဲ့ဈေးကွက်က မှတ်တမ်းတွေအရ ဒီအမေအိုကြီးဟာ အတော်လေး ချမ်းသာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုဟာ သူ့ နာမည် နဲ့ ပါ ၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ လောက် တန်ကြေးရှိတဲ့ တရုတ် ငွေရေးကြေးရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုကို သူပိုင်တာပေါ့ ။
မစ္စယန် ဘယ်လို မုဆိုးမ ဖြစ်သလဲက အစ ၊ မသိကြသေးတဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုတွေ ၊ သူ့နာမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထိ ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့်လို့သားဖြစ်သူ တရုတ်ပြည်ရဲ့အခွင့်ထူးခံ အုပ်ချူပ်သူ ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှပါ။ ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာ ၀မ်က ဒုတိယ၀န်ကြီး ချုပ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာထူးက ဖယ်ရှားခံရတဲ့ ထိပ်တန်း စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ဘုန်းမီးနေ လ တောက်ပချိန်နဲ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်က ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးရေး တောင်းဆို ချိန်ပေါ့ ) နောက် ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
၀မ်ကျားပေါင် ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ ဖြစ်တဲ့ သူ့ ရဲ့သား ၊ သမီး ၊ ညီငယ် နဲ့ယောက်ဖတော်တို့ ဟာ အလွန်အမင်း ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူတွေ ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာ ကို နယူးယောက် တိုင်း(မ) ကစုံစမ်း ထောက်လှမ်းသတင်း ရေးသားမှုမှာ ဖော်ပြထား တယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ဆွေတော်မျိုး တော်တွေဟာ ရှုးရှုးရှဲရှဲနဲ့ဆွေနွေး ညှိုနှိုင်းမှုတွေမှာ တရုတ်တွေ ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း တစ်ဖက်ကမ်းခတ်သူတွပေါ့ ။
အဲဒီထဲမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလျှံ ရှိ တဲ့ရင်နှီးမြုပ်မှုတွေနဲ့ အတူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုကို ထိမ်းချုပ်ထားသူပဲပေါ့။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀မ်ရဲ့မိသားစုတွေက သိပ်ကြီးတော့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် နေရာယူထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မိတ်ဆွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက် ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ မိသားစု စီးပွားဖက်တွေ ၊ ကျောင်းနေဖက်
တွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ၊ ရဲ ဘော် ရဲဘက်တွေရဲ့နာမည်နဲ့စီးပွားရေးတွေ နောက်မှာ ၀မ်မိသားစု က ခပ်ပါးပါးလး ကပ်ပါလာတာပါ။ နိုင်ငံရေးအရ အဆက်သွယ် ကောင်းကောင်း ရှိတဲ့လူကို လူတိုင်းက သိကျွမ်း ခင်မင်ချင် ကြတာပါပဲ ။ သူတို့ ကလည်း အစိုးရရဲ့ဘယ် လမ်းရွေးရင် ကောင်းနိုးနိုး အခြေအနေတွေကနေ စီးပွားရေး အကျိုး အမြတ်တွေ ရရှိခဲ့ကြ တာမှာ အစိုးရ အနေနဲ့သြဇာသက်ရောက်မှု တရုတ်ပြည်ရဲ့လျှင်လျှင် မြန်မြန်နဲ့ကြီးထွား လာတဲ့ စီးပွားရေးကနေ သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်ပြည် က တခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့မတူတာက ၊ ၀မ် မိသားစုရဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ တရုတ် အစိုးရပိုင် ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကနေ ငွေကြေးအရ ကျော ထောက်နောက်ခံ ပေးမှုကို အခါအား
လျှော်စွာ ရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာတော့ ရရှိထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထား တာက China Moblie လို ကုမ္ပဏီတွေ ၊ အာရှရဲ့ကျိကျိတက် သူဌေးကြီးတွေ ရဲ့ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးမှုတွေကို ၀မ် မိသားစု ရခဲ့ တာပါပဲ။
နယူးယောက် တိုင်းမဂ္ဂဇင်း က ရရှိ ထားချက်တွေအရ ၀မ် ရဲ့စီးပွားရေး အင်ပါယာကြီးမှာ ဘဏ်တွေကို ရှယ်ယာဝင်ထားတာတွေ ၊ စိန် နဲ့ကျောက်မျက် ရတနာလုပ်ငန်း ၊ ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေ ၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေ ၊ အခြေခံ အဆောက် အဦးတွေ တည်ဆောက်မှု ပရောဂျက်တွေနဲ့တစ်ချို့ ကတော့ ပြည်ပမှ အခြေစိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပါ။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလျှံကျော် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသည့် တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင် ဇနီးဖြစ်သူ ကျန်ပိုင်လီသည် ပီကင်း ကျောက်စိမ်းနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဌ ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်ပြီး တရုတ် ကျောက်မျက် ရတနာ အသင်း ၏ ဒုဥက္ကဌလည်း ဖြစ်သည်။ ကျန်သည် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်
တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်း နှင့် စိန် ကို အထူး ကျွမ်းကျင်သည်။
နယူးယောက် တိုင်း သတင်းစာ တွင် ပါရှိသည့် သတင်းထောက် ဒေးဗစ် ဘာဘိုဇာ ၏ ” Billions in Hidden Riches for Family of Chinese Leader” သတင်း ဆောင်း ပါး နှင့် The Economist မဂ္ဂဇင်း ပါ The Man Who Must Change ကို ဆီလျှော် အောင် FNG ၏ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် တင်ကျော်ကျော်စိုး မှ ဘာသာ ပြန် ဆို ဖော်ပြထား ခြင်း ဖြစ် ပါသည်။